Kônfosianisma - Wikipedia
Ny kônfosianisma dia iray amin' ireo sekoly lehibe ara-pilôzôfia sy ara-pitondrantena ary ara-pôlitika (sy ara-pivavahana koa) ao Sina. Nivoatra nandritra ny taonarivo roa izy nanomboka tamin' ny asasoratr' ilay filôzôfa atao amin' ny teny sinoa hoe Kongfuzi (sinoa: 孔夫子) (551-479 tal. J.K.) izay fantatra amin' ny anarana hoe Kônfosiosy (latina: Confucius). Atao hoe Rújiā (izay midika hoe "sekolin' ny manam-pahaizana") (儒家) avy eo Rúxué (izay midika hoe "fampianaran' ny manam-pahaizana") (儒学) ny kôfosianisma amin' ny teny sinoa.
Rehefa avy nifanehatra amin' ireo sekolim-pisainana mpifaninana aminy nandritra ny Vanimpotoan' ny Fanjakana Miady ka resy tamin' ny fitondran' ny mpanjaka Qin Shi Huang (秦始皇 ) mpanorina ny empira voalohany, dia noteren' ny emperora Han Wudi (漢武帝) (156 - 87 tal. J.K.) ho foto-pampianaram-panjakana ka nijanona tamin' izany satany izany hatramin' ny niorenan' ny Repoblikan' i Sina tamin' ny taona 1911 (repoblika teo anelanelan' ny taona 1911 -1949). Niditra tany Vietnamy sy tany Kôrea ary tany Japàna koa ny kôfosianisma ka tao izy dia nampiraisim-bolo tamin' ny toe-java-misy teo an-toerana.
Anisan' ireo singa telo lehibe mandrafitra ny fototry ny kolontsaina sinoa ny kôfosianisma, ka ny roa hafa dia ny taôisma sy ny bodisma, nefa ny kôfosianisma no tena manana ny akony lehibe amin' izy telo ireo.
2 Ny fototra iorenan' ny kônfosianisma
2.1 Ny Wujing
2.2 Ny Sishu
3 Ny fanarahana ny fampianaran' i Kônfosiosy
3.1 Ny sekoly manaraka ny fampianaran' i Kônfosiosy
3.1.1 Sekolin' i Mencius
3.1.2 Sekolin' i Xunzi
3.2 Ny kônfosianisma teo amin' ny tantara
3.2.1 Ny kônfosianisma tao Sina
3.2.2 Ny kônfosianisma tany ivelan' i Sina
Ny kônfosianisma dia lamim-pandinihana lehibe ao amin' ny filôzôfia sinoa izay nivoatra avy amin' ny fampianaran' i Kônfosiosy sy ny mpianany ary miompana amin' ny fitsipi-pitondrantena, ny fahaiza-mitondra firenena, ny zavakanto, ny fahendrena azo ampiharina avy hatrany amin' ny fiainana, ary ny fifandraisana eo amin' ny fiarahamonina. Ny kônfosianisma dia nisy akony teo amin' ny fiheveran' ny Sinoa manoloana ny fiainana sady nandraikitra ny fomba fiainana sy ny fenitra momba ny soatoavina ara-piarahamonina no nanome fototra ara-tsaina ny petra-kevitra sy andry ara-pôlitika sinoa. Ny kônfosianisma dia niely manerana an' i Sina sy i Kôrea ary i Japàna hatrany Vietnamy, ka lasa taharo tsy miovan' ny kolontsaina any amin' ny tany Farany-Atsinanana. Nahasintona ny filôzôfa tandrefana koa ny kônfosianisma nanomboka tamin' ny nampidirana azy tany amin' ny tany Andrefana.
Na dia nanjary firehan-kevitra (ideôlôjia) ôfisialin' ny fanjakana tany Sina aza ny kôfosianisma dia tsy lasa endri-pivavahana manana ny andrim-pivavahana sy mpitondra fivavahana.
Ny manam-pahaizana sinoa dia nanome voninahitra an' i Kônfosiosy no sady niantso azy ho mpampianatra sy olon-kendry, nefa tsy nanao azy ho andriamanitra, na dia nandiso ny fomba fijerin' ny mpanoratra tandrefana ny amin' izany ny fivavahana amin' ny fanahin' ny razana izay mifamatotra amin' ny fivavahana sinoa. Tsy nilaza ny tenany ho andriamanitra koa i Kônfosiosy. Tsy tahaka ny zava-misy ao amin' ny fivavahana kristiana ny kônfosianisma, ka ireo tempoly mijoalajoala anomezam-boninahitra an' i Kônfosiosy dia tsy toeram-piangonana ho an' ny mpanaraka ny fampianarany, fa trano azon' ny rehetra idirana hanaovana lanonana isan-taona, indrindra amin' ny andro fitsingerenan' ny nahaterahan' i Kônfosiosy. Imbetsaka no nisy olona nanao izay hahatonga an' i Kônfosiosy ho lasa andriamanitra sy hanova ny kônfosianisma ho fanompoam-pivavahana nefa tsy nahomby izany noho ny fomban' ity filôzôfia ity izay tsy mifantoka amin' ny fivavahana fa ivelan' ny fivavahana.
Ny fototra iorenan' ny kônfosianismaHanova
Ny foto-kevi-dehiben' ny kônfosianisma dia voarakitra ao amin' ny lahatsoratra sinoa dimy tranainy izay nolovana tamin' i Kônfosiosy sy ny mpianany niaina tamin' ny andron' ny dinastia Zhu (杼), tamin' ny vaninandro nampiroborobo izany filôzôfia izany. Ireo lahatsoratra ireo dia azo zaraina ho vondrona roa: dia ny Wujing dimy (五經) sy Sishu efatra (四書).
Ny Wujing, izay voasoratra talohan' i Kônfosiosy dia ahitana ny Yi jing (“Bokin' ny fiovan' endrika”), ny Shu jing (“Bokin' ny zava-nitranga isan-taona”), ny Shi jing (“Bokin' ny tononkalo”), ny Liji (“Bokin' ny fombafomba”) ary ny Chun qiu (“ny Lohataona sy ny Fararano”).
Ny Yi jing dia mety boky fianarana manao sikidy izay nangonina voalohany tamin' ny dinastia Shang talohan' ny taonjato faha-11 tal. J.K. sady ahitana tovana misy fivoasana izay heverina fa nataon' i Kônfosiosy sy ireo mpianany. Ny Shu king dia fanangonana tahirin-kevitra tranainy momba ny tantara ary ny Shi jing dia fanangonana tonokalo tamin' ny Andro Taloha. Ny Liji kosa dia famoaboasana momba ny fitondran-tena izay mitanisa ireo lalàna fototra mifehy ny fitondran-tena imasom-bahoaka sy an' ny tena manokana. Nisy nanapotika izy io nefa ny votoatoatin' ny zavatra raketiny dia votahiry ao amin' ny angon-dahatsoratra ananana ankehitriny, izay vita tamin' ny dinastia Han. Ny Chun qiu, izay hany asasoratra heverina fa nangonin' i Kônfosiosy tenany, dia fandaharana ara-potoana ireo zava-nitranga ara-tantara manan-danja indrindra nitranga tao Lu, izay faritany nahaterahan' i Kônfosiosy, sy tao amin' ny faritany hafa tao Sina nandritra ny vanipotoan' ny tompomenakely teo anelanelan' ny taonjato faha-8 tal. J.K. sy ny taona nahafatesan' i Kônfosiosy tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K.
Ny Sishu ("Boky efatra"), izay fanangonan-dresak' i Kônfosiosy sy an' i Menkiosy izay arahin' ny fivoasana nataon' ireo mpianany avy dia ahitana ny Lunyu ("Dinidinika"), fanangonana ny fanoharana nataon' i Kônfosiosy izay fototr' ity filôzôfia ity sy ny fitsipi-pitondran-tena voiziny; ny Daxue ("Foto-pampianarana lehibe") sy ny Zhongyong ("Fampiasana ny toerana"), dia mirakitra ny teny ara-pilôzôfia nataon' i Kônfosiosy izay natsitoko amin' ny fomba milamina tsara sady anaovan' ireo mpianany fivoasana; ary farany ny Mencius Mengkiu ("") izay ahitana ireo fampianaran' ny mpianatr' i Kônfosiosy iray.
Ireo toromarik' i Kônfosiosy dia nampiainy am-bava sy noraketina an-tsoratra ao amin' ny Lunyu. Miseho amin’ izany ho môralista mandala ny mahantra ny mpampianatra eto, amin' ny vaninandro nisian' ny fikorontanana lehibe ara-pôlitika sy fiovana ara-piarahamonina vokatry ny fisaratsarahan' ny fanjakà-mpanjaka notapahin' ireo Zhou ho fanjakàn-tompomenakely maro nahery miady. Izany fisetrasetrana izany dia nanery an' i Kônfosiosy ny mpandinika hafa maro hieritreritra ny amin' ny fomba hamerenana indray izany fanjaka-mpanjaka izany. ka nahatonga azy ireo ho lasa filôzôfa tsy satry mpitondra fanavaozana.
Amin' i Kônfosiosy dia zavatra iray ihany ny lamina ara-pôlitika sy ny lamina ara-piarahamonina. Ny fahamatorana sy ny fahamarinan' ireo mpitondra sy ny olona ambony tsirairay no miantoka ny fahasalaman' ny fanjakana. Voatazona ny filaminana noho ny fombafomba (li) sy ny mozika, dia ny mozika sinoa izay ivon' ny fombafomba sy ny fanompoana ara-pivavahana. Nambaran' i Kônfosiosy ny fahambonian' ny mozika vokatry ny anjara asany eo amin' ny fombafomba (ritoaly) sy ny fahefany eo amin' ny fon' ny olombelona. Nankafiziny koa ny tononkalon' ny literariora sinoa taloha (izay nahitana ny ankamaroany notononina mandritra ny mozika), izay noderainy nohony fananany lanja eo amin' ny fitaizana ny kolontsaina. Nanamafy koa izy fa ilaina ny famerenana ny fahamarinan-tandrifin' ny teny sy ny fitenenana natokana hilazana ny olona sy ny zavatra hafa satria izany no hany miantoka ny filaminana sy ny maha-izy ny tsirairay eo amin' ny fiarahamonina, izay tsy haharitra raha tsy omena ny anarana tandrify sy mendrika azy.
Ny fanjakana dia manana ny mozikany sy ny fomba fanaony manokana, izay nosafidina tamin' ireo fomba amam-panao nifandovana, izay nivoaka hoazy avy amin' ny vahoaka mahatsiaro fahasambarana sy mikendry mandrakariva ny hahasoa izay tsy ilaina hofehezina amin' ny lalàna intsony, rehefa tsy misy ny ady. Nandeha eran' i Sina i Kônfosiosy nitady ny mpitarika/mpitondra mahafa-po izay afaka mampihatra pôlitika araka ny iheveran' i Kônfosiosy azy.
Ny ivon-kevitry ny etikan' i Kônfosiosy dia azo fintinina amin' ny atao hoe "ren", izay adika amin' ny hoe "fitiavana", "hatsaram-panahy", "maha olombelona" na "toetran' ny fo". Ny ren dia ny toetra tsara fara tampony tokony hananan' ny olona. Tamin' ny andron' i Kônfosiosy dia toetra tokony hanan' ireo olona ao amin' ny sarangan' ny mpitondra ny ren ka nihananana ny hevitry ny hoe "fahamboniana", "sarangan’ ny olona ambony", nefa niitatra ny hevitr' io teny io taty aoriana. Amin' ny fifandraisan' ny samy olona sahala amin' izay hita eo amin' ny olona roa, ny ren dia miseho aamin' ny alalan' ny zhong, izay tsy inona fa ny fananana toetra mahatoky amin' ny tena sy amin' ny hafa. Miseho amin' ny alalan' ny shu koa izany fifandraisan' ny olona roa izany, dia ny shu izay midika fitiavana ny hafa mifanohitra amin' ny fitiavan-tena, izay heverin' i Kônfosiosy ho fitsipika volamena, araka ny teniny hoe: "Aza atao amin' ny hafa izay tsy tianao hataon' ny olona aminao". Maro koa ireo toetra tsara araka ny fampianaran' i Kônfosiosy ka isan' izany ny fahitsiana, ny fahaiza-miaina, ny fahamatorana. Ny olona manana ireo toetra tsara rehetra ireo dia atao hoe junzi ("olona tongalafatra"). Amin' ny lafiny pôlitika dia nitaky ny hisian' ny fitondram-panjakana mikarakara ny vahoaka toy ny fikarakaran' ny ray ny zanaka i Kônfosiosy, dia fitondram-panjakana tapahin' andriamanjaka tsara fanahy sy mendri-kaja sady to teny eo amin' ny vahoaka entiny. Ny mpitondra dia tokony hanana toetra tsara ara-pitondrantena mba halain' ny vahoaka tahaka sy mba hahasarika mpanompo hafa hankao amin' ny fanjakany. Raha ny lafiny fanabeazana indray no jerena dia nanandratra avo ny fitsipika fototra izay nanjaka nandritra ny vanimpotoan' ny tompomenakely i Kônfosiosy, izay milaza fa "tsy anavahana saranga ny fanabeazana".
Ny fanarahana ny fampianaran' i KônfosiosyHanova
Ny sekoly manaraka ny fampianaran' i KônfosiosyHanova
Taorian' ny fahafatesan' i Kônfosiosy dia sekoly roa lehibe mivoy ny fampianarany no nitsangana, ka ny iray dia notarihin' i Mencius ary ny iray hafa notarihin' i Xunzi (Hsün-tzu).
Sekolin' i MenciusHanova
I Mencius dia nandray ny fampianarana arak' etikan' i Kônfosiosy ka nanindry mafy ny fahatsarana izay miaraka ao amin' ny fomban' ny olombelona. Mihevitra anefa izy fa afaka manova izany fahatsarana voajanahary izany amin' ny alalan' ny asa manimba na amin' ny alalan' ny fifampikasohany amin' ny tontolo tsy madio. Amin' ny fikoloana ireo soatoavina môraly no ahafahan' ny olona mitozo amim-pharetana na mamerina indray ny fahatsarana fototra ao anatiny. Amin' ny lafiny ara-pôliltika dia heverin' ny olona sasany ho mpisava lalana ny demôkrasia i Mencius, saria narosony ny hevitra ny amin' ny maha masi-mandidy ny vahoaka ao anatin' ny fanjakana. Izany tsangan-kevitra izany dia nisampana avy amin' ny atao hoe fahefa-mpanjaka izay hazavaina ao amin' ny fivavahana sinoa ho "fahefana avy amin' ny Lanitra". Araka izany fiheverana izany izay mifanahaka amin' ny fananganana ny fanapahan' olon-tokana voa-janahary araka ny fiheverana ao amin' ny Tontolo Tandrefana, ny Lanitra (Tian) dia manome ny andriamanjaka hendry no hanapaka nefa azony atao koa ny manaisotra an' izany amin' ny mpanapaka lozabe mpanao didy jadona. Amin' i Mencius dia mitovy lenta ny sitrapon' ny Lanitra sy ny an’ ny vahoaka, izay miaina sambatra rehefa tapahin' ny mpanjaka tsara fanahy, nefa mitroatra manohitra ny mpanjaka mangeja.
Sekolin' i XunziHanova
Tsy mitovy amin' i Mencius i Xunzi izay nihevitra fa ny olona manana toetra ratsy hatrany an-kibon-dreniny (na fara fahakeliny tsy mifehy tena sy tsy mety fehezina) dia afaka mihatsara amin' ny alalan' ny fanabeazana ara-môraly. Heveriny fa ny faniriana dia tsy tokony hatodika sy hoferana amin' ny alalan' ny fitsipi-pankatoavana, ary ny toetra dia tefen' ny fanajana tanteraka ny fombafomba sy tefen' ny fanaovana mozika. Izany fehezam-pitsipika izany dia misy fiantraikany mahery amin' ny toetry ny olona amin' ny fanjorana ny fihetseham-po araka izay tokony ho izy sy amin' ny fampandrosoana ny firindrana anaty. Xunzi no mpanohana farany ny tokony hanarahana fombafomba eo amin' ny kônfosianisma.
Ny kônfosianisma teo amin' ny tantaraHanova
Ny kônfosianisma tao SinaHanova
Taorian' ny tsy nahitana azy mandritra ny fotoana fohy tamin' ny taonjato faha-3 tal. J.K., tamin' ny andro nanapahan' ny dinastia Qin izay lozabe nandrara ny filôzôfia rehetra afa-tsy ny azy, izay tsy inona fa ny sekolin' ny Lalàna, dia nahazo aina indray ny kônfosianisma tamin' ny fanapahan' ny dinastia Han (206 tal. J.K. - 220 taor. J.K.). Ireo soratr' i Kônfosiosy nopotehina nandritra ny vanimpotoana teo aloha dia naverina amin' ny laoniny indray, noraiketina sy nampianarin' ireo manam-pahaizana tao amin' ny akademian' ny empira. Natao hakana tsiahy izy ireo amin' ny fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana tao amin' ny empira, ka ny mpifaninana amin' ny toeran' ny tomponan' adraikitra lehibe ao amin' ny fitondram-panjakana dia nosafidina arakaraka ny helehiben' ny fahalalany momba ny haisoratra tranainy. Ny mpanorina ny dinastia Gaodi sy ny Wudi izay taranany malaza dia samy mpomba ny kônfosianisma, izay niantraika tamin' ny fiainana ara-tsaina sy ara-pôlitika sinoa. Tafiditra tany Vietinamy koa izany tamin' ny alalan' ny tafiky ny Wudi.
Ny fahombiazan' ny kôfosianisma Han dia asan' i Dong Zhongshu, izay voalohany niaro ny lamim-panabeazana miorina amin' ireo fampianaran' i Kônfosiosy. Nampihatra ireo fiheverana momba ny tontolo sy momba ny fanandroana tamin' izany vanimpotoana izany i Dong Zhongshu ka nino ny fifandraisana hentitra eo amin' ny olombelona sy ny tontolon' ny zavaboary. Araka ny heviny, ny asa amam-pihetsika ataon' ny olona, indrindra ny ataon' ny andriamanjaka, dia matetika loharano ipoiran' ny trangan-javatra tsy mahazatra eo amin' ny zavaboary. Noho izany ny mpanjaka, noho ny fananany fahefana, dia tompon' andraikitry ny trangan-javatra toy ny fahamaizan' ny tanàna, ny tondra-drano, ny horohoron-tany, ny tako-masoandro ary ny takom-bolana. Ireo famantarana ireo dia fambara ratsy miseho mba ho fampitandremana ny olombelona hahafantatra mialoha fa ity tontolo ity dia tsy tonga lafatra. Ny tahotra ny fanasaziana avy amin' ny zanahary dia niharihary fa mahomby tanteraka mba hamerana ny fahefana tsy refesi-mandidy ananan' ny mpanjaka.
I Dong Zhongshu dia nahazo ny fahefana momba ny fanaraha-maso ny fahefan' ny emperora, ka lasa nanimba endrika ny maha miorina amin' ny lalànan' ny saina ny fampianaran' i Kônfosiosy.
Tamin' ny fikorontanana ara-pôlitika izay nanarakaraka ny fahataperan' ny dinastia Han dia norahonan' ny lamin' ny taôisma sy ny an' ny bodisma mpifanohitra aminy ny kônfosianisma ka nisy fotoana tsy nankasitrahan' ny fitondrana azy. Nitohy anefa ny fanaovan' ireo nahita fianarana ny tahirin-kevitry ny kônfosianisma ho loharano lehibe amin' ny fampianarana. Rehefa niverina indray ny filaminana sy ny fandrosoan' ny toekarena tamin' ny andron' ny dinastia Tang (taona 618-906) dia nihanahazo laka indray ny kônfosianisma. Ny fanaovan' ireo manam-pahaizana kônfosiana ampihimamba ny fahalalana dia niantoka indray ny andraikitr' izy ireo teo amin' ny fitondrana ny raharaham-panjakana. Nisandratra indray ny kônfosianisma ka lasa foto-pampianarana an' ny fanjakana.
Ny kônfosianisma tany ivelan' i SinaHanova
Nahita ny sivilizasiona sinoa ny Japôney tamin' ny taonjato faha-7 ka nampiditra fandaharam-panitsiana ny fampianarana kônfosiana teo amin' ny fanjakana tamin' ny fanapahan' ny andriandahy Shotoku Taishi sy ny emperora Tenji, ka nametraka lamina momba ny fidirana ho mpiasam-panjakana izay nalaina tahaka tamin' ny an' ny Sinoa. Ireo andrim-panjakana vaovao anefa dia fitaovana enti-miasa ho an' ny fitondram-panjakana izay lasa sarotra fehezina ao amin' ny firenena anjakan' ny olona ambony saranga toa an' i Japàna ka lasa indrindra loharano fahazoan' ny sarangan' ny andriana fujiwara anaram-boninahitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kônfosianisma&oldid=1011246"
Dernière modification le 13 Mey 2021, à 15:56
Voaova farany tamin'ny 13 Mey 2021 amin'ny 15:56 ity pejy ity.